Hulu's Yakanyanya Mhosva Yechokwadi Nyaya, 'Candy' Yakatangira Co-Yakanyorwa naJoe Bob Briggs.
musha	Horror Varaidzo Nhau	Hulu's Yakanyanya Mhosva Yechokwadi Nyaya, 'Candy' Yakatangira Co-Yakanyorwa naJoe Bob Briggs.
Zvakanaka, yakanyorwa pamwe naJohn Bloom aka Joe Bob Briggs
by Trey Hilburn III Dai 10, 2022
by Trey Hilburn III Dai 10, 2022 3,555 maonero
Hulu ichangoburwa Texas mhosva yechokwadi nyaya, kendi inyaya yekurangana kwemhondi. Iyo yakakosha mini-yakatevedzana iri pachikamu chayo chechitatu uye yakaratidza kudzika kukuru muna Jessica Biel uyo anotamba chinzvimbo cheasina kubatanidzwa uye anonyengedza. kendi. Zvinyorwa kubva kuTexas Monthly zvakatanga kutaura nyaya ye macabre uye zviitiko zvinoshamisa izvo nyaya yakaumbwa nazvo. Izvo zvinyorwa zvakanyorwa naJim Atkinson naJohn Bloom. Iye John Bloom uyo akazove asiri mumwe kunze kwaJoe Bob Briggs. Kana kuti, Joe Bob aive John Bloom akaoma kutaura mazuva ano.
Zvinyorwa zviviri zveTexas Monthly zvakanzi "Rudo neRufu muSilicon Prairie, Chikamu I: Candy Montgomery's Affair" uye Rudo uye Rufu muSilicon Prairie, Chikamu II: Kuuraya kwaBetty Gore ibasa rehunyanzvi rekuruka kwehutsotsi hwechokwadi hunoenda pamusoro pezvinyorwa zve. zviitiko. Ehe, zvinyorwa zvinopinda mukati nekubuda kwemhosva, asi zvakare inotsanangura zvine hungwaru zviitiko uye mavara aibatanidzwa mune zvese zvinotungamira kune mhosva zvakare.
Zvose zvinyorwa zvinofadza uye zvakaguma mubhuku rine musoro Humbowo hweRudo nevanyori vaviri ava. Zvave zvakanaka kuona akateedzana 'yekurondedzera chimiro uye kuona kuti akaenzanisa sei nezvinyorwa naBloom naAtkinson. Zvave kutonyanya kunakidza kuona vatambi vakaiswa mune imwe neimwe yeaya mabasa makuru ane mavara.
Ndinokurudzira zvikuru kuverenga zvinyorwa zvose. Zvinogara zvakanaka kudzoka unoona basa rekutanga raBloom pamwe chete nemabasa ekutanga aJoe Bob Briggs pachake. Uyezve, ndeipi nguva iri nani yekuwedzera kunyudzwa izvozvi? Ndinoreva, isu tiri chete pachikamu chechipiri cheThe Last Drive In paShudder. Saka, wadii kuzadza imwe nguva uchiverenga mabasa ekutanga aJohn Bloom? Nguva dzakanaka kumativi ose.
Unogona kutarisa izvo Texas Monthly zvinyorwa nekutungamira pamusoro HERE uye kana uchida kutora bhuku, Evidence of Love unogona kunhonga izvozvo HERE.